अमेरिकामा केही साताभित्रै कोरोना भाइरसवि’रुद्धको खोप आ’मरूपमा उपलब्ध हुने ! – Daily NpNews
पायल्सको स´मस्याले है´रान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् मु´क्ति
बुधबार ‘सिधा कुरा जनतासँग अन्तिम कार्यक्रम’, भावुक हुँदै रवि लामिछानेले श्रोता दर्शकलाई दिए यस्तो सन्देश
ढ´ल्यो एउटा बलियो खम्बा, कृष्ण कंडेल पनि ढोगेर गरे अ´न्तिम बिदाइ (भिडियोसहित)
लडाईंको लाहुरेका चर्चित गायक रत्न बाँनियाको नि’ धन, आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि गरिने
यो मितिमा विवाह गदै नायिका मौनी रोय
दाँतलाई सेतो र चम्किलो बनाउन अपनाउनुहोस् यी ६ मध्ये कुनै एक उपाय
कन्चनको आमाको मुहारमा आयो पहिलो पटक खुशी , तैपनि रोकियन खुशीको आसु ( भिडियो )
सप्तरीमा १५ वर्षकी छोरी ४३ वर्षका पुरुषलाई आमाबुवाले नै सुम्पन लागेपछि
मुख्य पृष्ठ /अन्तरास्ट्रिय/अमेरिकामा केही साताभित्रै कोरोना भाइरसवि’रुद्धको खोप आ’मरूपमा उपलब्ध हुने !
अमेरिकामा केही साताभित्रै कोरोना भाइरसवि’रुद्धको खोप आ’मरूपमा उपलब्ध हुने !
एजेन्सी , अमेरिकामा आमरूपमा कोरोनाभाइरवि’रुद्धको खो’प उपलब्ध हुने समयबारे राष्ट्रपति र से’न्टर्स फर डि’जिज क’न्ट्रोल एन्ड प्रि’भेन्सनका निर्देशकले प’रस्परविरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही हप्ताभित्र आमरूपमा वितरणका लागि खो’प तयार हुने दा’बी गरेका छन् भने सीडीसीका निर्देशक रो’बर्ट रे’डफिल्डले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा आमनागरिकका लागि उपलब्ध हुनसक्ने बताएका छन्। कोरोनाभाइरसवि’रुद्धको खो’प शु’रूवाती चरणमा यो वर्षको नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाको बीचमा उपलब्ध हुनसक्ने सी’डीसीका निर्देशक रो’बर्ट रे’डफिल्डले बताए।
तर त्यो समयमा सीमित मात्रामा मात्रै आ’पूर्ति हुनसक्ने र आफूहरूले प्राथमिकता नि’र्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। रे’डफिल्डले भने, “यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि कहिले आ’मरूपमा अमेरिकी ना’गरिकलाई खो’प उ’पलब्ध हुनसक्छ भने मलाई लाग्छ सन् २०२१ को जूनदेखि सेप्टेम्बरको बीचसम्ममा हुनसक्छ।” तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ग’ल्तीले अथवा द्वि’विधामा परेर सी’डीसीका निर्देशकले त्यसो भनेको हुनसक्ने दा’बी गरेका छन्। उनले अमेरिकामा कोरोनाभाइरसवि’रुद्ध प्र’भावकारी खोप केही साताभित्रै आमरूपमा वितरणका लागि तयार हुने अनुमान सुनाए।
ट्रम्पले भने, “सी’डीसीका निर्देशकले जे भने त्यो ग’लत भने। हामी तत्काल ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई खो’प उपलब्ध गराउन तयार हुनेछौँ र त्यसपछि त्यहाँभन्दा बाहिर पनि किनकि हामी अरू मुलुकलाई पनि सहयोग गर्न गइरहेका छौँ।” डे’मोक्र्याटिक पा’र्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति प’दका उम्मेदवार जो बा’इडनले चु’नावी फा’इदाका लागि ट्रम्पले खो’पको विषयलाई प्रयोग गरिरहेको आ’रोप लगाएका छन्। खो’पसम्बन्धी ट्रम्पका प्र’तिबद्धताहरूमा अमेरिकी ना’गरिकको वि’श्वास नरहेको बा’इडनको भनाइ छ ।बीबीसी।
श्रीमतीले अपरिचित पुरुषलाई फेसवुकमा ‘श्रीमानले मलाई माया गर्दैनन्’ भनिन्, अपरिचित पुरुषले गरिदिए श्रीमानको ह’ ‘त्या
कोरोनाबाट मृतक लाशको आँखा लगायतका अंग नै गायब भएको देखिएपछि हंगामा !
अमेरिकी चुनावमा २ नेपाली अमेरिकनमध्ये ढकाल ४८३९ मतले विजयी, गुरुङले ल्याइन् २९८५ मत